Honor Magic 4 Pro yekutanga ongororo: Yakawanda sei kamera?
Honor yakazivisa Mashiripiti 4 Pro muna Kukadzi 2022, mwedzi mitanhatu chete mushure mekutangwa kwepasi rose kweHonor Magic 6. Chokwadi, tarisa nharembozha idzi uye unogona kusakurumidza kuona mutsauko, asi akasiyana. Pane kudaro ichi pamwe chiratidzo chechinangwa: Kukudzwa kunoda kutorwa zvakakomba uye munguva pfupi iyo Honor Magic 3 Pro yaziviswa, asi iyo Honor Magic 4 ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Honor Magic 4 Pro yekutanga ongororo: Yakawanda sei kamera?
Backbone One wongororo: Shandura iPhone yako kuita mini mitambo console
Iyo mobile gaming shanduko inogona kunge yakare heti parizvino, ine zvisingaverengeki zvakabudirira maapplication nemitambo inouya mupfungwa, asi isu tiri pakati pemafungu matsva muchimiro chekutamba kure uye kutenderera kwemutambo. Kutamba kuburitswa kwakazara kwekonsoni pafoni yako zvinogoneka izvozvi, chero uine yakanaka internet yekubatanidza, asi kuzviita nekubata zvidhinha kunogara kuchirambidza ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Backbone One wongororo: Shandura iPhone yako kuita mini mitambo koni
Audio Pro C10 MkII ongororo: Superb imba ruzha
Kana iwe uine mugadziri akatogadzirwa mutauri wepamusoro, hapasi nguva dzose yakajeka uye yakajeka seti yenzira dzekuvandudza. Asi kuwedzera dzimwe nzira dziri nyore dzekubatanidza pasina waya uye kuiburitsa kunze kwemusuwo kune OK mumabhuku edu. Vatauri vepamusoro vakangwara: Premium Alexa, Google Mubatsiri uye Siri vatauri varipo kutenga Ndezvipi chaizvo izvo Audio Pro ine… [Verenga zvakawanda ...] nezve Audio Pro C10 MkII ongororo: Superb imba ruzha
Insta360 Imwe RS ongororo: Yakanakisa yepasirese?
Pakatangwa Insta360 One R muna 2020, yaive kamera isina kufanana neyatakamboona. Iyo yakangwara modular dhizaini yaireva kuti yaigona kushandiswa se360-degree kamera kana sechiitiko kamera nekungodzvanya pane akasiyana lens module. Ikozvino, makore akati wandei gare gare, Insta360 iri kutarisa kunatsiridza formula yayo nekuunzwa kweOne RS. Iyi kamera nyowani inovandudza pane yayo ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Insta360 Imwe RS wongororo: Iyo yakanakisa yenyika mbiri?
Kirby uye Iyo Yakakanganwa Nyika ongororo: Mhuri-inoshamwaridzika mafaro mukati mese
Yave yakareba, yakareba nguva ichiuya, asi Kirby pakupedzisira ane yakazara 3D mutambo kubva kumusoro kusvika pasi, chimwe chinhu chakanyanya kunonoka zvekuti unogona kufunga kuti chatoitika iwe usingazive. Yakanakisa iri kuuya yeNintendo Shandura mitambo yekutarisira kutamba Izvi ndizvo chaizvo, asi: Kirby uye Nyika Yakakanganwa ndiyo 3D platformer iyo nhevedzano yanga yakamirira - uye ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Kirby uye Iyo Yakakanganwa Nyika ongororo: Mhuri-inoshamwaridzika mafaro mukati mese
Ghostwire Tokyo ongororo: Ini handitye mweya
Shinji Mikami paanotanga franchise nyowani, iwe unoteerera. Ndiwo mutemo wakachengeteka wakapihwa maitiro ake ebudiriro, imwe inodzokera kumashure kune yekutanga Resident Evil mumazuva ake eCapcom. Mitambo yakanakisa iri kuuya yePS5: Mazita ePlayStation ekufungidzira Izvozvi, mushure mekubudirira kwehukama kweazvino Evil Mukati memitambo, adzoka neimwe kuvhurwa kutsva, mu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Ghostwire Tokyo ongororo: Ini handitye mweya
Fujifilm X-T30 II ongororo: Diki kusimudzira, ichiri ine simba kamera
Yechipiri-chizvarwa Fujifilm X-T30 haisi yekusimudzira kamera. Chokwadi, misiyano yayo kana ichienzaniswa neyekutanga idiki zvekuti unonetseka kuona. Asi irwo rudzi rwekunze kweiyo pfungwa: iyo X-T30 II iri pano yevatengi vatsva uye, yakapihwa inonzwisisika mutengo poindi, kunyangwe iri diki kufambira mberi kweiyo nhevedzano, ichiri ine simba kamera. Chii chitsva kuna Mark II? … [Verenga zvakawanda ...] nezve Fujifilm X-T30 II ongororo: Diki kukwidziridzwa, ichiri ine simba kamera
Audio-Technica ATH-GDL3 ongororo: Yakareruka mitambo yemitambo yemusoro yakagadzikana zvakanyanya
Iyo Audio-Technica ATH-GDL3 inomira kunze kwechaunga ichienzaniswa nemamwe mahedhifoni emitambo kune ayo anorova bhuruu maratidziro (hapana fancy RGB mwenje kana chero chinhu pano). Asi dhizaini yekumashure yakangonaka, kunyanya kubva kuhedhiseti inovimbisa kutendeseka kwepamusoro-soro ine yakavhurika-kumashure soundscape, zvese zvine mutengo unonzwisisika. Saka zvinonyatso mira sei pazviri… [Verenga zvakawanda ...] nezve Audio-Technica ATH-GDL3 ongororo: Yakareruka mutambo wemitambo musoro wakanyanya kugadzikana
Samsung QN95B Neo QLED 4K TV wongororo: Nyeredzi inopenya yemubhaisikopo
Iyo Samsung QN95B ndiyo mureza wekambani Neo QLED 4K HDR TV ye2022, uye haingosanganisire Mini LED backlight uye Quantum Dot mafirita emavara akajeka uye akachena, asiwo yazvino Neural Quantum processor yekukwira kwepamusoro uye kugadzirisa mufananidzo. Iyi TV zvakare inozvirumbidza yakazara seti yezvimiro, ine styling yakavakirwa paSamsung's high-end 8K TVs, slimline One Connect ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung QN95B Neo QLED 4K TV wongororo: Nyeredzi inopenya yemubhaisikopo
Devialet Dione anoda kuve wekupedzisira single-box soundbar
Devialet yakazivisa yakakwira-yekupedzisira ruzha, ichivavarira kuunza yakanakisa ruzivo iwe yauchawana kubva kune-mu-imwe unit. Iko hakuna yakaparadzana subwoofer, hapana sarudzo yekubvisa vatauri kana kushandisa setiraiti kune yakatenderedza ruzha, panzvimbo pacho yakagadzirirwa kuburitsa ruzha rwakanyanya uchitaridzika zvakanaka kana wakagara pasi peTV yako. Kutaridzika zvakanaka chikamu chepasuru - kunyanya ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Devialet Dione anoda kuve wekupedzisira single-bhokisi soundbar
WWE 2K22 ongororo: Mambo wemhete zvakare
Isu tanga tiri pro wrestling vateveri kwemakumi mashoma emakore, tichitevera zviitiko zveWWE, WCW, NJPW, Ring of Honor, iyo UK's Progress Wrestling uye, nguva pfupi yadarika, AEW. Isu tanga zvakare mafani eakasiyana emitambo akateedzera zviitiko zvakakura kupfuura zvehupenyu nyeredzi, zvese zvine rezinesi uye zvakagadzirwa. Nekudaro, WWE 2K20 yaive yakaipa zvekuti yakapotsa yaputsa rudo rwedu ne… [Verenga zvakawanda ...] nezve WWE 2K22 ongororo: Mambo wemhete zvakare
Apple iPhone 13 ongororo: Iyo iPhone yemunhu wese
Iyo Apple iPhone 13 yakatevedzana ine midziyo ina yekusarudza kubva: iyo diki-diki iPhone 13 mini; iyi modhi chaiyo pakuongorora, iyo iPhone 13; iyo yakawedzera yepamusoro iPhone 13 Pro; uye hombe-screen mudziyo weboka, iyo iPhone 13 Pro Max. Saka iyi 'standard' iPhone ndiyo yakanyatsokodzera vanhu vazhinji here? Zvakanaka, musiyano uripakati peiyo iPhone 13 neiyo iPhone 13 Pro idiki muna 2021 pane… [Verenga zvakawanda ...] nezve Apple iPhone 13 ongororo: Iyo iPhone yemunhu wese